Benessy Harrisson Sebastien : « Vonona hanolo-tanana ny Filoham-pirenena izahay » -
AccueilSongandinaBenessy Harrisson Sebastien : « Vonona hanolo-tanana ny Filoham-pirenena izahay »
Benessy Harrisson Sebastien : « Vonona hanolo-tanana ny Filoham-pirenena izahay »
17/04/2018 admintriatra Songandina 0
Fotoana izao hanomezan-tanana ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ka vonona ny izahay hanolo-tanana azy, hoy ny Dr Benessy Harrison Sebastien, loholona amperin’asa sy miara-miasa amin’ny fitondrana ary filohan’ny fikambanana FIMAMI . Maro tamin’ireo fikambanana sy antoko politika ao Toamasina moa no nangataka azy ho mpiahy iny faritra iny. « Ny faritra rehetra toa misy minisitra Coach avokoa. Izahay aty amin’ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo anefa toa mbola tsy hainay tsara. Mety aminay mihitsy raha io loholona Sabastien Harrisson Benessy io no omena izany toerana izany. Tombony ho azy ny maha olom-boafidy azy nandritra ny taona maro. Manana ny fikambanana matanjaka indrindra aty aminay ihany koa izy”, araka ny fanazavana.
Ny biby tsy manan-doha tokoa hono mantsy tsy mandeha, ka dia izay no anton’ny nanaovan’ireto fikambanana sy antoko politika nanolotra an’i Benessy izao. “ Fantatry ny rehetra aty aminay izy. Efa maro ny asa sosialy nataony ary mifandray amin’ny madinika sy ny olo-maventy izy”, hoy hatrany ny fanazavana.
Rehefa nanontaniana mikasika ity antson’ny fikambanana sy ny antoko politika ao Toamasina ity moa ny Sénateur Sebastien Harrison Benessy dia nanambara mazava fa vonona tokoa ny tenany hanolotra ny tsara indrindra ho an’ny Filoham-pirenena. Efa ela izahay no niasa ho azy, hoy izy.
super nerve power dans Mitsangana ry Malagasy-TSY NAHALOA VOLAN’OLONA
Rajaonarimampianina Hery:« FENO NY FEPETRA IALAN’NY VAHOAKA ANATY FAHANTRANA »
80s fashion: I've been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is…